आउने यो नयाँ वर्षमा
कैयन कठिन दिन र रातहरू पट्यारलाग्दो ढंगले बिताइसके पश्चात ः आजदेखि हामी विवश नेपालीहरूले २००९ लाई विदाई गरी उहि विवश मनस्थिती लिएर व्यग्रतापूर्वक ईश्वी सन्को अर्को एउटा नौलो वर्ष २०१० को स्वागत गर्न लागि रहेका छौं । लाग्दछ, यो वर्षले आफ्नो पहिलो प्रहर बिताइरहँदा हामी नेपालीहरू हाम्रो देश र हामीहरूको नौलो र बैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना गर्ने गरी तयार पारिएको एउटा दस्तावेजका रूपमा ‘नयाँ नेपालको नयाँ संविधान’ पाएका हुनेछौं । खैर, यो हाम्रो स्वस्थ र आशावादी मस्तिष्कले कल्पना गरेको (तर सायदै पूरा नहुने) एउटा मृगतृष्णा मनमा लिई राखेको जस्तो पनि हुन सक्ला । तथापी हामीले तत्कालै यो नयाँ वर्षमा केही हुन्छ कि भनेर सोच्नु पनि हाम्रो मुर्खता मात्र पो हुने हो कि ! नेताहरू (भन्न पनि लाज लागेर आउँछ) ले सायद ईश्वी सन्को यो नयाँ वर्षमा कसरी हुन्छ सत्तामा आफू र आफ्नो पार्टीको गतिलो उपस्थितीका लागि सपना साँचिरहेका होलान् । कोही आफ्ना परिवार, इष्टमित्र र कार्यकर्ताहरूको वथान बोकेर नेपाल राज्यको राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी विदेश सयरको योजनाको तानाबाना बुन्दै होलान् । कतै, कोही अरुहरू बन्द, हडताल, चक्काजाम र आन्दोलन गरी देशमा अराजक स्थितीको सृजना कसरी गर्ने भन्ने बारेको गम्भिर छलफलमा निमग्न होलान् । तर आम नेपाली बालबालिकाहरू प्रत्येक दिन बिहान आफ्ना बावा आमालाई सोधिरहेका हुने होलान – “बाबा, आज स्कुल बन्द छ कि छैन् ?!” “आमा, आज साँच्चिकै हाम्रो स्कुलमा पढाई हुने हो र ?” यो वर्ष पनि सायद आफ्नो +२ पास गरेका हजारौं युवा युवतीहरू शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूमा “कुन देशका लागि विद्यार्थी भिषा प्राप्त गर्न सहज छ ?” भनेर सोधी त्यसका लागि आवश्यक तयारीमा लाग्दै गरेका हुनेछन् होला । वा कुनै राजदुतावासको गेटबाहिर आफ्नो भिसाका आवेदन फर्म भर्नका लागि रात–रातभर लामो लाइनमा लामबद्ध भई बसिरहेका पो हुनेछन् कि । अरू त म के लेखुँ मित्रहरू ? साँच्चिकै ईश्वी सन्को यो नयाँ वर्षमा हामी नेपालीहरूले के पाउँछौ अनि के गुमाउँछौं होला ?